Ibsaa Jireenyaa - Page 53 of 58 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Yuniversitiin iddoo dhaloonni beekumsa itti kuufate biyyaa fi addunyaa ofii itti ijaarudha. Wantoota adda addaa irraa fagaachun beekumsa fi akkamitti biyya akka jijjiran irratti iddoo itti xiyyeefataniidha. Kanaafu yuniversitiin iddoo jijjiramaa fi isa seenun carraa guddaadha jechuu dandeenya. Garuu yuniversitii seenuun qofti gahaadha? Jijjiramni yuniversitii keessatti adeemsifamuu hoo maaliidha? Of gaafanne beeknaa? Read more
Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-lakk.8
September 21, 2016 Sammubani Leave a comment
Madaan kee kan darbanii fi yaadonni negaativi ammaa gara olii ol guddachuu irraa duubatti si hin harkisin. Mataa kee ol qabadhu, baatiri/ibsaa milkaa’innaa fuundura keetti ilaali. Fundura kee dukkana goote hin ilaalin. Gargaarsaf Rabbiin kadhu. Dhugumatti Inni Tumsaa /Gargaaraa hundarra caaludha. Read more
Meeqa kamtu obsa dhabee milkaa’innaa fi gammachuu irraa duubatti mucucaate! Obsii yeroo tokko tokko akka ibiddaa nama guba. Garuu gubaan isaa gara waan gaarii fi ifatti jijjirama. Namoonni gubaa obsaa kana baadhachuu dhabuu isaanitirraa kan ka’ee gubaa hamaa san caalu wanta jarjaniifi dhandhamu. Ilmi namaa jarjaraa fi ariifataadha. Wanta tokko dafee argu barbaada. Kuni garuu miidhaa malee bu’aa isaa fidu hin danda’u. Seenaa ummattoota darbanii yoo ilaallu, Nabiyyoota isaanitiin, “Adabbii ittiin nu sodaachistan fidaa dhugaa kan dubbattan yoo taatan.” jechuuni turan. Wanti Nabiyyoonni isaani itti waaman obsaan fudhachuu dhiisanii, adabbii waadaa galamanitti ariifatu. Wanti itti ariifatan isaanii hin oolle isaanitti bu’ee isaan balleesse. Kuni hundi obsa dhabuu fi jarjaruudha. Read more
Xurree Milkaa’innaa fi Gammachuu-Lakk.7
September 13, 2016 Sammubani 2 comments
Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji’a Caamsaa (May) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti funaanamtedha. Xurree jechuun karaa biraatin ‘daandii’ jechuudha.
Jireenya kee keessatti jijjiramni wanta tasa uumamu osoo hin ta’iin adeemsadha. Takkaan fiixe barbaaddu koruu hin dandeessu. Akkuma guyya guyyaan jijjiramuuf carraaqxun marsaa guddinnaa tokko irraa gara marsaa itti aanutti dabarta. Jireenya keessatti tuqaan ani nama guutudha itti jettu gonkumaa hin jiru. Yeroo hundaa jijjiramaaf affeeramta. Kanaafu jijjirama arguuf carraa argatte hundatti fayyadami. Jarjarte abdii hin kutin. Abdii fi obsaan gara funduraatti tarkaanfadhu. Yommuu rakkoon ykn dogongorri uumamu rifatte jijjiramaa fi foyya’iinsa irraa duubatti hin mucucaatin. Yommuu gufuun si muudatu marsaa jijjiramaa tokko irraa marsaa itti aanutti akka darbaa jirtuu yaadadhu. Gufuwwan jireenyatin rukutamte duubatti hin hafin. Wanta qabduun carraaqi. Insha Allah guyyaa tokko jireenyi tartiiba horatti. Read more
Obsii furtuu milkaa’innaa fi gammachuuti. Obsaan ala wanti ta’u tokkollee hin jiru. Obsa qabaachun nama hundarrattu dirqama.Akkuma Oromoon jedhu “Obsaan aannan goromsaa dhugaa.” Namni obsuu rakkoo fi carraaqi booda jireenya mijaawa jiraata. Akkuma goromsii aannan kennuuf yeroo fudhatu, firiin obsaas yeroo kan fudhatuudha. “Jarjaraan re’ee hin horu.” jedhe Oromoon. Namni obsuu dhiise jarjaruu jireenya gaarii hin jiraatu. Kanaafi obsii furtuu milkaa’innaa fi gammachuu jenne kaane. Read more
Xurree Milkaa’inna fi Gammachuu-Lakk.6
September 7, 2016 Sammubani Leave a comment
Yoo nama hundaa ija shakkiitin ilaalte, mataa keeti fi namoota biroo miita. Yaadota hin barbaachisneen sammuu fi yeroo kee gubda, boqonnaa sammuu dhabda. Tarkaanfi isaa/ishii guutu akka hordoftuu of goota. Karaa biraatin, shakkii kee irratti hundaa’un yoo nama san irratti tarkaanfi fudhatte bololi’a gaabbi fi gaddaa keessa jiraatta. Kanaafu, shakkii fi jette jette namni sitti fidu of eeggadhu. ‘Osoo hin guutatin hin gugatin’ jedhe Oromon. Gugatun dura dhugaa fi soba ta’uu isaa addaan baafadhu boodarra rakkoo guddaa keessa galtaati. Read more
Obsa yommuu jedhamuu wanta salphaa namatti fakkaata. Garuu obsii wanta jechaan dubbatamu yookiin sammuu qofaan yaadamu osoo hin ta’in wanta gochaan agarsiifamuudha. Obsii jireenya fi qaama ilma namaa guuta kan tuquudha. Bakka obsi hin jirretti jireenyi hin jiru osoo jedhame dhugaa irraa hin fagaatu. Namoonni garmalee yommuu gaddanii fi dhiphatan yoo obsa hin qabaatin of galaafatuun jireenya ofi balleessu. Mee har’aa waa’ee obsaa ilaalchise barreefama gabaaba armaan gadii kitaabota adda addaa irraa funaanne waliin haa ilaallu. Read more
Dhugumatti jireenyi toltuu fi baay’een hiyyummaa yookiin hanqinna caalaa qormaatan cimtudha. Yommuu qabeenyi baay’attu fi lafarra yaatu qalbiin akka dhagaatti jabaatti, of gadi qabuun itti ulfaata kan Rabbiin rahmata godheef malee. Copha imimmaani Rabbii jedhanii ija keessa gadi dhangalaasun ni ulfaata. Meeqa kamtu jiraa yeroo qabeenya hagaa qabu Rabbiin sirritti osoo gabbaruu ergasi yommuu qabeenyi baay’attu Rabbiin irraa garagale. Baay’inna qabeenyatin faahishan (wanti fokkuu fi jibbisiisan) babal’ataa jiru. Kanaafu baay’inna qabeenyatiif dharra’uun dura badii qabeenyi qabdu sirritti hubadhu. Akkuma hiyyumma sodaattu balaa qabeenyan dhufus sodaadhu. Osoo qalbiin tee sababa baay’inna qabeenyatin gogde fi yaadannoo Rabbii irraa garagalte, balaan kana (gogiinsa qalbii) caalu ni jiraa sila? Read more
Xurree Milkaa’inna fi Gammachuu-lakk.4
August 25, 2016 Sammubani Leave a comment
Shakkii fi yaadota hin barbaachisneen of hin dhiphisin. Yommuu nama nagaha wanta badaan shakkitu, wanta hin jirre arguuf carraaqa jirta. Sheyxaanni sitti dhufuun yaadota hin barbaachisne fi fuudhatama hin qabne sitti haasasa. Ergasii ni yaaddofta. Wanta hin jirreen of dhiphista. Yeroo kanatti jedhi,,” A’uzu billahi mina sheytaani rajim”Asi badii. Yookiin immoo nama nagaha wanta badaan shakkitu san du’aayi godhiif. Jedhi,”Yaa Rabbii badii kanarraa isa/ishii tiksi.” Dabalataanis jette jette nama irraa guurun mataa of hin dhukkubsiin. Nama jette jette sitti fidu irraa dheessi. Kunniin karaa shakkii badaa irraa ittiin baraaramtudha. “Shakkiin dubbii sobaati.” Read more
Kuusaa Select Month May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 8.1
Tafsiira Suuratu Qaaf-Xumura
Tafsiira Suuratu Qaaf-kutaa 7